ဆီဘော်ဂျီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆီဘော်ဂျီယမ် (Seaborgium) ဒြပ်စင်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်တခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဓာတ်ခွဲခန်း၌သာ ဖန်တီးထုတ်ယူ ရရှိ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ဖြစ်တည်လာပုံကို သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း silver ကဲ့သို့အဖြူရောင် သို့မဟုတ် မီးခိုရောင်ရှိသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ၎င်း၏သင်္ကေတမှာ Sg ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၀၆ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အတည်ငြိမ်ဆုံး အိုင်ဆိုတုပ် အမှတ်စဉ်မှာ 271Sg ဖြစ်၍ သက်တမ်းဝက်(half-life) မှာ ၂.၄ မိနစ်ဖြစ်သည်။ Seaborgium ဒြပ်စင်အမည်သည် ၎င်းအားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော အမေရိကန်ဓါတုဗေဒပညာရှင် Glenn T.Seaborg ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်သိရှိရသော သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအရ ၎င်းဒြပ်စင်သည် အုပ်စု (၆) ရှိဒြပ်စင်များကဲ့သို့ ဓာတ်တိုးခြင်းအခြေအနေကိုရောက်ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းအခြေအနေမှ SgO2Cl2 ဒြပ်ပေါင်း နှင့် SgO42- ကဲ့သို့သောဓါတုဗေဒဒြပ်ပေါင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Most stable isotopes of seaborgium
syn 8.9 s α 8.90, 8.84, 8.76 261Rf
syn 16.2 s α 8.70 261mRf
syn 1.4 min 17% α 8.20 263Rf
syn 14 min α 8.41(4) 265Rf
syn 1.6 min 67% α 8.54 267Rf
synthetic ဒြပ်စင်များ ရှာဖွေရာတွင် ရှေ့ဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Glenn T. Seaborg အားရည်စူး၍ ဆီဘော်ဂျီယမ် ဟုအမည်ပေးခဲ့
၎င်းဒြပ်စင်ကို သဘာဝတွင် မတွေ့ရှိနိုင်ပဲ ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းမှသာ ထုတ်ယူနိုင်သည်။
၎င်းဒြပ်စင်သည် အလွန်မတည်မြဲသောဒြပ်စင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အလွန်လျင်မြန်စွာ အခြားဒြပ်စင်များအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားသောကြောင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ပါ။
Seaborgium ဒြပ်စင်၏သက်တမ်းဝက်(half-life)သည် ၂၁ စက္ကန့်ခန့် အလွန်တိုသောကြောင့် ပတ်ဝန်ကျင်သို့ သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ (2006) "Transactinides and the future elements", The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements, 3rd, Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1။
↑ ၂.၀ ၂.၁ "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals" (2011). Physical Review B 84 (11). doi:10.1103/PhysRevB.84.113104. Bibcode: 2011PhRvB..84k3104O.
↑ Periodic Table, Seaborgium။ Royal Chemical Society။ 20 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Neutron-deficient superheavy nuclei obtained in the 240Pu+48Ca reaction" (30 January 2018). Physical Review C 97 (14320): 1–10. doi:10.1103/PhysRevC.97.014320. Bibcode: 2018PhRvC..97a4320U.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆီဘော်ဂျီယမ်&oldid=518130" မှ ရယူရန်